🥇 ▷ Xirfadlayaasheeda cilmiga (astronomers) waxay helaan xiddig qadiimi ah oo mashiinka wakhtiga Big Bang ✅
Xirfadlayaasheeda cilmiga (astronomers) waxay helaan xiddig qadiimi ah oo mashiinka wakhtiga Big Bang
Saynisyahanada waxay heleen xiddig mashiin waqti ah kaasoo nooga gudbiya xiddigihii ugu horreeyay ee goob joog ka ahaa markii koonku abuuray.
Xirfadlayaasheeda cilmiga (astronomers) waxay sahamin ka sameeyeen dunida oo dhan waxayna arkeen waxa loogu yeedhay a “Mashiinka waqtiga” ee nooga dhoofiyo qaar ka mid ah xiddigihii ugu horreeyay markii Caalamku uu sameeyay mahadnaq Balaaran.
Sida ku xusan baaritaan dhowaan la daabacay Ogeysiisyada Billaha ah ee Boqortooyada Astronomical Society: Waraaqdas, saynisyahano ka socda Jaamacadda Qaranka ee Australia ayaa helay mid ka mid ah xiddigooddii ugu horreeyay ee la sameeyay ka dib markii Boqortooyadii ay abuurtay Bangiga weyn.
Qoraa hogaamiyaha daraasadda, Thomas Nordlander, wuxuu ka hadlay cilmi-baaristan: “Waxaan helnay mashiin waqti ah oo dib noogu soo celiya xiddigihii ugu horreeyay adduunka,” ayuu yidhi.
Tan iyo markii Big Bang dhacday 13.8 bilyan sano kahor, qaar badan oo ka mid ah xiddigaha sameeyay waayihii hore waxay ahaayeen kuwo layaab leh marka la barbar dhigo Sunkeena. Cawaaqibka ay xiddiguhu aad u weyn yihiin ayaa ah inay iyaguna cimri gaaban yihiin. Mar alla markii ay xiddiguhu xumaadaan illaa ay ka gaarayaan qarxintooda supernova, waxyaabo badan oo ka mid ah ashyaa’da ayaa loo daadgureeyay meel bannaan. Tani waa waxa ay xiddigu xiddiguhu raadinayaan waana waxa ay dhowaan ogaadeen.
Waxyaabaha xiddigta ay heleen waxay ahaayeen xiddig ku dhawaad ​​10 jeer ka weyn cabbirkii Sunnadayaga. Supernova-ka xiddigaha sidoo kale waxay ahayd wax laga xumaado, maadaama inta badan waxyaabaha ka dhashay supernova aysan safar aad u fog gaarin. Mar alla markii uu qaraxu dhacay, waxyaabaha ugu badan waxaa ka maqnaa xiddigta ” neutron ” cufan, laakiin qaybo jajab ah oo kaarboonka ah ayaa ku guuleystey inay baxsadaan waana tan waxa uu cilmiga xiddiguhu ogaadey.
Milky Way (Sawir: NASA)
Nordlander ayaa sharraxay, “xiddigan aadka u naxdinta liita, oo suuragal ah in la sameeyay dhowr boqol oo milyan kadib Big Bang, ayaa leh heerar bir ah oo ah 1.5 milyan jeer ka hooseeya kuwa cadceedda,” ayuu yidhi Nordlander. “Xiddiggan, hal kaliya oo 50-kii bilyan ee kasta waa bir, waa sida dhibic biyo ah oo laga helay barkadaha Olombikada,” ayuu raaciyay.
Baarayaasha, natiijooyinka daraasadooda waxay si xoog leh u soo jeedinayaan suurtagalnimada daraasadda xiddigaha duugoobay ama dhintay iyagoo u maraya carruurtooda. Waxaan rajeyneynaa, inay awoodi doonaan inay helaan xiddigo “waqti waqti” badan leh si ay u helaan faham qoto dheer oo ku saabsan walxaha kala duwan ee adduunka.
Xigasho: Waqtiga Ganacsiga Caalamiga ah